के अमेरिकाको ५जी रुचि वास्तवमै ५जीमा छ त? - Technology Khabar
» के अमेरिकाको ५जी रुचि वास्तवमै ५जीमा छ त?
५जी आफ्नै प्रचारको सिकार भएको छ । डिजिटल साम्राज्यतिर ढोका सोचिएको ५जी ले उपभोक्ता र व्यवसायहरूलाई मापन र विश्वसनीयताको भरमा नयाँ अवसर दिन्छ जुन अघिल्लो पुस्तासंग छँदै छैन् । उच्च दक्षता भएको एयर इन्टरफेस, चलाउनलाई धेरै ब्यान्ड, वस्तुहरू कनेक्टिभिटीका लागि विशाल स्केलेबिलिटी र विश्वसनीय ‘लो ल्याटेन्सी’ भएकोले ५जी हरेक तरिकामा फोरजी भन्दा राम्रो छ । तर योसंग अतिरिक्त ‘जी’ छ ।
जहाँ मोबाईल टेक्नोलोजीको अघिल्ला पुस्ताले प्रयोगकर्ताहरूको छोटो देखि मध्यावधि आवश्यकताहरू सम्बोधन गरेको थियो, ५जीले अहिलेसम्म नदेखिएको तर भविष्यमा आवश्यकताहरूको जाँच गर्दै डिजिटल इकोनोमीसंग सबै चिज कन्नेक्टेड्, सबै चिज सेन्सिङ र सबै चिज इन्टेलिजेन्ट देख्दछ । नतिजा, ५जी एक सेवा उन्मुख मोबाइल समाधान हो जसले उपभोक्ताको लागि ब्रोडब्यान्ड मात्र नभई भर्टिकल बजारहरुलाई पनि इन्टेलिजेन्ट ब्यान्डविथ र कम्प्यूटर पावर आवेदन एकीकरण मार्फत टर्बोचार्ज गर्दछ, जुन सेवा आवश्यकताहरुसँग गतिशिल रुपमा परिवर्तन हुन्छ ।
तर सेवा केन्द्रित भए नभए पनि इन्टरनेटको सुन्दरता अमूर्त तह र अन्तर्निहित नेटवर्क पूर्वाधार, डाटा र हामीले प्रयोग गर्ने अनुप्रयोगहरु बीच रहेको छ । विशेष रुपमा इन्टरनेट प्रोटोकलको मुख्य उद्देश्य प्याकीटाइज्ड डाटा सर्वव्यापी र विश्वसनीयताका साथ प्रसारित गर्न अनुमति दिनु हो, चाहे त्यसमा ५जी नै किन समावेश नहोस् ।
५जी र मोबाइल सेलुलर टेक्नोलोजी समग्रमा इन्टरनेट पावरिङ्ग पूर्वाधारको केवल एक सानो अंश हो र बढ्दै गरेको डिजिटल इकोनोमीको तुलनामा ५जी ग्लोबल पूर्वाधारको कुल मुल्य घट्दो छ । वास्तबमा सम्पूर्ण दूरसञ्चार पूर्वाधार बजार आज करिब ८० अर्ब अमेरिकी डलर रहेको छ र सन् २०२५ को आसपासमा १०० अर्ब डलरको अंक पार गर्ने प्रक्षेपण गरिएको छ । त्यसमध्ये, लगभग आधा २०२६ सम्ममा ५जी पूर्वाधार हुनेछ । यसको तुलनामा मार्च १, २०२० मा अल्फाबेट, अमेजन, एप्पल, फेसबुक र माइक्रोसफ्टको बाह्र महिनाको अन्त्यमा संयुक्त राजस्व ९४३ अर्ब डलर थियो ।
यदि उस्तै विकास कायम रहने हो भने अमेरिकाको ठूला ५ इन्टरनेट विशाल संस्थाहरुको मूल्य २.५ गुणा वा २०२६ सम्ममा करिब २.५ ट्रिलियन अमेरिकी डलर वा ५जी पूर्वाधारको कुल मूल्य भन्दा ५० गुणा बढी हुन सक्दछ । अझै पछाडि जाँदा, कुल डिजिटल अर्थव्यवस्था जुन २०२५–२०२६ सम्म विश्व जीडिपीमा २ ५प्रतिशत योगदान दिने भनिएको छ, त्यस्को मूल्य ५जीको योगदान ०.२ प्रतिशत गरी करीब २० अर्ब अमेरिकी डलर हुनेछ ।
त्यसो भए किन अमेरिकालाई ५जी मा चासो ?
अमेरिकालाई टेलिकम पूर्वाधार बजारको हिस्साको स्वामित्वमा कम चासो छ र संकेत पठाउनमा बढी चासो छ । ह्वावे पक्कै पनि चीनको सबैभन्दा ठुलो अन्तर्राष्ट्रिय सफलताको स्टोरी हो जुन एउटा निरन्तर व्यापारमा ध्यानको कारण सम्भब भयो र जुन बहु–दशक लगानी रणनीतिमा निर्भर गर्दछ।
नतिजा, ह्वावे ५जीमा एक नेतृत्व धारण गर्दछ जुन धेरैको नजरमा निकटको प्रतिस्पर्धी भन्दा १२ देखि २४ महिना अगाडि मानिन्छ । अनियमित रूपमा मोबाइल प्रविधिको एक विशेष पुस्ता जस्तै ५जी को प्रक्षेपलाई रोक्दै र यसको प्रभाव समग्र डिजिटल अर्थव्यवस्थामा अधिक देखाउनु, आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्सको एकमात्र सक्षमकर्ताको रूपमा एक विशेष पुस्ताको सिपीयु हो भन्न मिल्दछ ।
५जी रोक्नुहोस् ६जी पप अप हुन्छ । सिक्सजी रोक्नुहोस् ७जी पप अप हुन्छ । नामकर को तरिका अप्रासंगिक छ । यी मानकहरू अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरूका संघ र सयौं व्यक्तिगत सदस्यहरूसहित अपरेटर र विक्रेताहरूद्वारा विकसित गरिएको हो । एक अग्रणी एथलीटले उनीहरूको खेलको नियम परिभाषित गरे जति एकल विक्रेताले प्रक्रियालाई परिभाषित गर्दैन । ५जी मा संयुक्त राज्यको आक्रमण, मापदण्ड प्रकृयाको प्रतिरोध हो, जसले अनियन्त्रीत रुपमा कुनै कम्पनीहरु लाई लक्षित गर्छ जसले नियमहरु मात्र पलना गरेका छन् र राम्रोसँग खेल्छन, र यसले सम्पूर्ण आईटियूको गैर नाफाको जनादेश “संसारका सबै मानिसहरुलाई जोड्दै” लाई बेवास्ता गर्दछ।
एटोर्नी जनरल विलियम बारले चीन इनिसियटिभ सम्मेलनको आफ्नो मुख्य भाषणमा भन्नुभयो, “इतिहासमा पहिलो पटक संयुक्त राज्य अमेरिकाले अर्को प्राविधिक युगको नेतृत्व गरिरहेको छैन ।” अपरिहार्य देखिए पनि यो हाल एक अतिशयोक्ति हो कि विशेष गरी ५जी एक मात्र टेक्नोलोजी हो, जुन हार्डवेयर र सफ्टवेयर विकासमा अमेरिकाको नेतृत्वलाई बेवास्ता गर्दछ । यो रेस, ५जी प्रभुत्वको बारेमा होईन, यो अग्रणी डिजिटल रूपान्तरणको बारेमा हो जुन समग्र अर्थतन्त्रलाई अझ सक्षम र उपभोक्ताको मागप्रति प्रतिक्रियाशील बनाउँदछ ।
मलाई सँधै सिकाइएको थियो कि तपाई छिटो दगुरेर दौड जित्नुहोस्, अरुको खुट्टा तानेर होईन । बेइजिङ्ग विदेश अध्ययन विश्वविद्यालयमा सहयोगी कानूनका प्रोफेसर गु बिनले हालसालै लेख्नुभयो, “अब जब अमेरिका टेक सर्वोच्चको उच्च खुट्किलामा पुग्दछ, यो अरुलाई दबाउन चाहन्छ ।” चीनले अमेरिकालाई पहिलै पार गरिसकेको छ तर दुर्भाग्यवश अमेरिकाले खेलको नियम परिवर्तन गर्न पाउँदछ, कमसेकम अहिलेको लागि । जबकि यो अपरिहार्य नहुन सक्छ कि चिनियाँ अर्थव्यवस्थाले अमेरिकाकोलाई नाघ्दछ, यो पक्कै पनि सम्भाव्य छ ।
संयुक्त राज्य अमेरिकाको ५जी विक्रेतामा प्रस्तावित हिस्सेदारी भर्खरको राजनीतिक रूपले प्रेरित गरिएको आक्रमण हो जुन विश्वलाई अझ ठूलो चेतावनी पठाउन तयार गरिएको थियो कि अमेरिका अझै प्रासंगिक छ । वास्तवमा अमेरिकी अर्थव्यवस्था नम्बर १ बाट नम्बर २ मा परिवर्तन सम्भवत सहस्राब्दी बग जस्तो असह्य हुन सक्छ, तर म इतिहासमा प्रतिनिधिको रुपमा जान चाहन्न जब यो हुन्छ।
(यो लेख ह्वावे नेपालले हामीलाई उपलब्ध गराएको हो)
नेपाल टेलिकमको बिलिङ्ग सिस्टमको मर्मत सम्भार आज राती पनि गरिने